पुनर्जन्म हुन्छ कि हुँदैन ? यस्तो वास्तविकता (भिडियोसहित) - Kendrabindu Nepal Online News
पुनर्जन्म हुन्छ कि हुँदैन ? यस्तो वास्तविकता (भिडियोसहित)
लाइफ स्टाइल, विशेष, समाज, स्वास्थ्य
काठमाडौंमा तीनदिनसम्म गैर धार्मिक ध्‍यान शिविर ‘नेपाली आत्माहरुको आत्मिक शुद्धिकरणका लागि’ ध्यान समर्पण चलेको थियो । शुक्रबारबाट टुँडिखेलमा सुरु भएको ध्यान समर्पणमा श्वामी शिवकृपानन्दले प्रवचन दिएका थिए ।
अन्तर्मनको शान्तियात्रा २०१८ नाम दिएको उक्त गैर धार्मिक ध्‍यान शिविरमा मानव जातिलाई सर्वव्‍यापी चेतनासँग जोड्‍ने एउटा सरल, अद्वितीय ध्‍यान र आध्‍यात्मिक ज्ञान बाँडिएको थियो ।
उक्त तीन दिने ध्यान शिवरमा उल्लेख्य मात्रामा भक्त भक्तिनीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा जो कसैले पनि श्वामीसँग प्रश्न सोध्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । श्वामीले सोधिएका प्रश्नहरुको उत्तर दिएका थिए । समर्पण आश्रमका संस्थापक समेत रहेका श्वामी शिवकृपानन्दसँग गरिएको एक विशेष कुराकानी: